CAD & အဆောက်အအုံစာအိတ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » ဂျော့ဘ် » CAD & အဆောက်အအုံစာအိတ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: CAD & အဆောက်အအုံစာအိတ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ
ရာထူး: CAD & အဆောက်အအုံစာအိတ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ
ကုမ္ပဏီ: အဆောက်အဦးစာအိတ်နည်းပညာ & သုတေသန
ဌာန : ဗိသုကာပညာ & CAD ဂရစ်ဖစ် * POSITION DESCRIPTION: အဆောက်အဦးစာအိတ်နည်းပညာ & သုတေသန (BET & R) အဘယ်သူ၏အဓိကတာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးသောသို့ input ကိုအဘို့အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းစဉ် isometric နှင့်ပုဒ်မ-အမြင် CAD အသေးစိတ်ကိုနှင့်ဆက်စပ်ရေးဆွဲများ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ BET & R ကိုဖွင့်စီမံကိန်းကိုအသင်းများကိုကူညီပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦး CAD & အဆောက်အအုံစာအိတ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ, ငှားရမ်းပါလိမ့်မည် စီမံကိန်းရဲ့အပြင်ပန်းအဆောက်အဦစာအိတ်ဒီဇိုင်း။ ဒီအနေအထား ( အသုံးပြု. စီမံကိန်းကို-တိကျတဲ့ဝတ်, fenestration, မိုးမိုးနှင့်ရေစိုခံတာအသေးစိတ်ကိုပြင်ဆင်နေအတွက်တာဝန်ရှိသည် Autodesk'' s ကို BET & R ကိုရဲ့အကြီးတန်းနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းထံမှလမ်းညွှန်မှုဦးတည်ချက်အောက်မှာ AutoCAD software ကို) ။ အဆိုပါ CAD & အဆောက်အအုံစာအိတ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူလည်းပဏာမဒီဇိုင်းသုတေသန, ပုံကြမ်း, ဂရပ်ဖစ်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုနှင့်မူကြမ်းပြန်ဆိုနှင့်အတူအခြားအနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်များကကူညီတွေနဲ့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ CAD & အဆောက်အအုံစာအိတ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူလည်းအချို့သော On-site စီမံကိန်းကိုစောင့်ကြည့်မှု, နည်းပညာဆိုင်ရာအရေးအသားဖျော်ဖြေဖို့တောင်းနှင့် / သို့မဟုတ် On-site ကိုအဆောက်အဦစာအိတ်စစ်တမ်းများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူကူညီစေခြင်းငှါ - အဆောက်အဦးရွေးချယ်ထားသူတစ်ဦးရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်မှုတိုးချဲ့ကူညီသမျှသောတာဝန်များကို နည်းပညာ, သိပ္ပံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းစာအိတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ရှုထောင့်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ အခန်းကဏ္ဍနှင့် response: မူလတန်းအခန်းက္ပ: CAD & အဆောက်အအုံစာအိတ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ အဓိကတာဝန်များ:
CAD ဆွဲပုံများ (ဆိုလိုသည်မှာ isometric နှင့်ပုဒ်မအသေးစိတ်အစီအစဉ်များ, မြင့်တက်, မက်တရစ်, အချိန်ဇယား, etc): နှစ်ဦးစလုံးတည်ဆဲ၏ပြုပြင်နှင့် retrofit အဘို့, အဆောက်အဦစာအိတ်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအမျိုးမျိုးများအတွက်ဝတ်, မိုးမိုး, ရေစိုခံတာနှင့် fenestration related နည်းပညာပိုင်းရေးဆွဲပြင်ဆင်ပါ အဆောက်အဦးများ, သစ်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်။ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: Isometric အမြင်အသေးစိတ်ရေးဆွဲ BET & R ကိုရဲ့စံအသေးစိတ်ပုံစံရှိပါတယ်။
လက်ဟာသ: ဒီအနေအထား In-အိမ်သူအိမ်သားအယူအဆမူကြမ်းနှင့် In-လယ်ကိုပုံကြမ်းအဖြစ်ပုံကြမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလက်အနုပညာနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်စွမ်းလိုအပ်သည်။
စက်မှုအသေးစိတ်: စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်အသင်းအဖွဲ့များအဘို့စီမံကိန်းတွေအမျိုးမျိုးများအတွက် CAD (ရံဖန်ရံခါ BlueBeam) ပုဒ်မနှင့် isometric အသေးစိတ်ကိုနှင့်ရေးဆွဲဖန်တီးပါ။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်: BET & R ကိုရဲ့အသေးစိတ်စာကြည့်တိုက်၏ upkeep အတွက် Assist ။
လိုအပ်သော FOR အရည်အချင်းများ CAD ႏွင့္ BULIDING စာအိတ် DESIGN အထူးကု:
နှင့်အတူအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု Autodesk software ကိုဆွဲ AutoCAD ။
Adobe က Photoshop ကို (သို့မဟုတ်အခြားအခမဲ့-Source photo-editing software ကို) နဲ့အလယ်အလတ်ကျွမ်းကျင်မှု။
အတူအလယ်အလတ်ကျွမ်းကျင်မှု Autodesk Revit နှင့် / သို့မဟုတ် Autodesk မက်စ်တစ်ဦးပေါင်း (သို့မဟုတ်အခြားအခမဲ့-Source 3D မော်ဒယ်ဆော့ဖျဝဲ) ဖြစ်ပါသည် 3DS ။
သည်အခြားဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ, client များနှင့်စီမံကိန်းအဖွဲ့အပေါ်တခြားသူတွေနဲ့ interface ကောင်းနှုတ်နှင့်လူ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှု။ ဖုန်းပေါ်မှာနှင့်မျက်နှာ-to-မျက်နှာသို့မဟုတ်တယ်လီကွန်ဖအစည်းအဝေးများရှိနေစဉ်တစ်ဦး, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ရွေများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုံးစံ၌ဆက်သွယ်ပြောဆို။
စွမ်းရည်များနှင့်စီမံကိန်းများ, ဘာလဲဆိုတော့အချိန်, အလုပ်ထုတ်ကုန်ကိုကယ်နှုတ်၏တောင်းဆိုချက်များကိုဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့-oriented ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြားသူများနှင့်ပူပေါင်းပြီးလုပ်ကိုင်ဖို့အလိုဆန္ဒ။
နှစ်ဦးစလုံးဟာတိကျမှန်ကန်တဲ့နှင့်ပြည့်စုံစီမံကိန်းကိုစံချိန်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ client များ, ကန်ထရိုက်တာများ, အခြားစီမံကိန်းကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့် BET & R ကိုဝန်ထမ်းနှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အဖွဲ့အစည်းအတွက်, ကုမ္ပဏီရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သကဲ့သို့ကောင်းပြီ, စည်းရုံးနှင့်သတိထား။
secondary အခန်းက္ပ: ု့ကပ်ရေး / နည်းပညာရှင် secondary တာဝန် (လိုအပ်သောအမျှ):
ဆောက်လုပ်ရေးအပိုင်း-အချိန် / ပြောက်ကွင်းဆင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး: On-site ကိုခရီးသွား On-သွားဆောက်လုပ်ရေးစောင့်ကြည့်ဖို့, များအတွက်စစ်ဆေးနေခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ, လျှောက်လွှာ (များ) ၏အရည်အသွေး, နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ထုတ်လုပ်သူ (s) ကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုပရောဂျက်လိုက်နာမှုမှတ်တမ်းတင်။
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း, စစ်တမ်းများနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး: ရေစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည် thermography အပါအဝင် On-site ကိုအဆောက်အဦစာအိတ်စစ်တမ်းများနှင့်ပစ္စည်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူ Assist ။ အဆောက်အဦအကဲဖြတ်, ဖြစ်နိုင်ခြေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးချွတ်ယွင်းတရားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်ဆက်စပ်သောစီမံကိန်းများကိုအပေါ်ကူညီပေးဖို့အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာများ: အဆောက်အဦးစာအိတ်အကဲဖြတ်ပြင်ဆင်ပါစစ်တမ်းများ, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်အတူကူညီများနှင့်လယ်ကွင်းအစီရင်ခံစာများကိုပွငျဆငျ။
စီမံကိန်းလက်စွဲ: သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စီမံကိန်းများအမျိုးမျိုးများအတွက်အလုပ်စာရွက်စာတမ်းများကမျြးစာလာနယ်ပယ်နှင့်အတူ Assist ။
နည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: စသည်တို့ကိုဆွေးနွေးပွဲများအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှတဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်လွယ်ခြင်း, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ symposia, နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသန၏တက်ကြွသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းပါ
MINIMUM အလုံးစုံတို့အဘို့အရည်အချင်းများ BET & R ကို ST AFF, အပါအဝင် CAD ႏွင့္ DESIGN အထူးကု:
အခြားသူတွေနဲ့အတူရ BET & R ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့-oriented န်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်စွမ်းကို။
Windows ကို 10 OS ကို Microsoft က Office ကို software ကို (Microsoft က (က MS) Word, MS Excel, က MS Outlook နဲ့, etc) Adobe Acrobat, Chrome / Firefox / IE ကိုအတူကျွမ်းကျင်မှု။
သာယာသော, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, ထုတ်လုပ်မှု oriented နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရိပ်။
Excellent ကစာအရေးအသား, အထောက်အထား, တည်းဖြတ်, နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု။
ရန်နှင့်အဆောက်အဦးစာအိတ်နည်းပညာ & သုတေသနလျှို့ဝှက်နှင့် Non-ပြိုင်ပွဲသဘောတူညီချက်များ၏လက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူညီချက်။
အလုပ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင် & လိုအပ်ချက်များ:
မိုးလုံလေလုံအလုပ်အဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင်: ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရုံးအခြေအနေများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ကုဗစားပွဲပေါ်မှာအဆင်အပြင်။ ထိုင်နေစဉ် desktop ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုမကြာခဏကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခြင်း။
အဆောက်အဦးအပြင်လုပ်ငန်းခွင်: ဆောက်လုပ်ရေး site ကိုအခြေအနေများ, အလားအလာရာသီဥတုအမျိုးအစားအားလုံးကို၌တည်၏။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ: LIFT တခါတရံလိုအပ်ပါသည်။
ခရီးသွားလိုအပ်ချက်များ: ဆီယက်တဲလ်ဧရိယာအနီးရှိသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ထဲက On-site ကိုအလုပျအတှကျရံဖန်ရံခါခရီးသွားစီမံကိန်းများကိုလိုအပ်အဖြစ်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် enviroments မှာပျော်ရွှင်စွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး BET & R ကိုရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားစံချိန်စံညွှန်းများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် prompt ကိုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုံးစံအတွက်လိုင်းများ၏လိုအပ်ချက်များတွေ့ဆုံစဉ်ထိရောက်မှုဦးစားပေးများနှင့်တိုးမြှင့်ဖို့နဲ့အခြားဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်သည်။
ကောင်းပြီစသည်တို့ကိုစနစ်တကျပုဂ္ဂိုလ်ရေးရုံးခန်း, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖိုင်များ, ဓာတ်ပုံများ, အချိန်မီဖက်ရှင်အတွက် client များ, အခြားစီမံကိန်းအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့် BET & R ကိုဝန်ထမ်းနှင့်အတူတက်ကြွစွာဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်။
ဂရုတစိုက်ကုမ္ပဏီရဲ့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ပြည့်စုံစီမံကိန်းကိုစံချိန်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ Project မှ Files များအားထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
AutoCAD:2နှစ်ပေါင်း
ထုတ်လုပ်မှုပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာချုပ် - အောက်တိုဘာလ 21, 2019
အယ်ဒီတာအဖွဲ့ - အောက်တိုဘာလ 20, 2019
ဖွံ့ဖြိုးရေးဂျူနီယာအယ်ဒီတာ / AP - အောက်တိုဘာလ 20, 2019
ယခင်: Los Angeles မှာ FuseFX မိတ်ဆက်နယူးဟာ FlagShip Facility
နောက်တစ်ခု: Marketing ကိုဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ